Dhalinyaro Soomaali ah oo buux dhaafiyay xabsiyada dalka Angola ee Galbeedka Afrika – SBC
Dhalinyaro Soomaali ah oo buux dhaafiyay xabsiyada dalka Angola ee Galbeedka Afrika
Posted by editor on October 3, 2011 Comments
Ku dhowaad 50-dhalinyaro Soomaali ahaa la sheegayaa in ay ku dhibaateysanyihiin xabsiyo waa weyn oo ku yaalo dhanka koonfureed ee dalka Angola, ka dib markii ay qabteen ciidamada xuduudka ilaaliyo ayagoo si sharci darro ah ku kalayaa dalkaasi.
Tiradan dhalinyarada ah ayaa la sheegayaa in qaarkood ay ku jiraan xabsiyadan muddo ka badan sanad halka qaar kalane lagu soo biiriyay mudooyinkii ugu dambeeyay, sidoo kale waxaa jiro qaar badan oo laga qabtay gudaha dalka ayagoo wax dal ku joog ah aan heysan.
Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Luanda ee caasimadda u ah dalka angola ayaa walaac xoogan ka muujiyay nolosha dhalintan soomaaliyeed isla markaana ugu baaqay dowladda soomaaliya in ay ku dadaasho sidii ay xabsiyada uga sii deyn lehed dhalinyaradan mudada dheer ku jirto xabsiyada dalka angola isla markaana wax nolo ah aanan ku heysan.
Xabsiyada ku yaallo dalka angola ayaa waxaa soomaalida loogu geystaa jirdil iyo dhibaateyn xoogan, taasoo geeni karto in ay mararka qaar u dhintaa walina ma jirto cid ka hadashay arintaas, ha ahaato dowlada soomaaliya, iyo ururada caalamiga ah ee udoodo xuquuqda qaxootiga.
Dhawaan ayey eheed markii qaar ka mid ah xildhibaanada soomaaliya ay baaq u direen dowladda dalka angola ayagoo ka codsaday in dowlada dalkaas ay xabsiyada ka sii deyso dhalinyarada soomaaliyee ee ku dhibaateysan, balse wali ma muuqato in uu hirgalay baaqaas.
Soomaali aad u fara badan ayaa sanadihii ugu dambeeyay ku qul-qulayay dalka angola kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay marti u noqdeen xabsiyada waaweyn ee dalka,halka qaar kalane ay nasiib u yeesheen in ay kalaan gudaha dalka ayna ka shaqeystaan.
Saadaad Ahmed Gobey,